Takura III | CDC Group
Private equity fund investing in private enterprises across SADC (Excluding South Africa) focusing on Zimbabwe.
CDC is providing a capital injection into the Zimbabwean economy by investing in Takura III to stimulate sustainable long-term business growth and create quality jobs. The fund supports the development of the private equity market in Zimbabwe by having an important demonstration effect.
Manica Boards and Doors PVT Ltd
Manica Boards & Doors is Zimbabwe's sole manufacturer of world class quality fibreboard branded “Zimtex”.
Zimbabwe Africa, East Africa Manufacturing June 2019 Active